Taylor Lopes ツ Blog – makombiyuta & Information Technology
Muenzaniso wakabudirira wematavi kuGit
Kuziva mashandisiro eGit kwakakosha, uye izvi zvinosanganisira kuchengeta inoshanda, inokwanisika software yekusimudzira nharaunda.
25 Nyamavhuvhu 2017 Taylor Lopes	bazi, kukudziridza, git, tenzi, batanidza, modhi, kusunungurwa	1 komenda
Isa mPDF isina Munyori pane server – PDF Mishumo pamwe PHP
The mPDF zvinowanisa PDF kubva CSS / HTML pamwe yakaderera kudzidza munyonga. Pfungwa apa ndeyekuita mPDF ishande isina yekuisa composer pane server. Munyori anozoshandiswa munharaunda uye anotumirwa gare gare kuseva.
18 Nyamavhuvhu 2017 Taylor Lopes	muimbisi, mpdf, PHP, mishumo	1 komenda
nekugadzirisa “Izvi netsa / 404 Not Found kukanganisa” pashure kugadzwa “zend-kuratidza”
Kushanda Middleware, Post ichi kupedza dambudziko “Izvi netsa / 404 Not Found kukanganisa” pashure kugadzwa “zend-kuratidza”.
10 Nyamavhuvhu 2017 Taylor Lopes	kusuwa, muimbisi, kuratidza, los / basepath, middleware, PHP, ruzhinji rwevanhu, zend, zend-kuratidza	1 komenda
28 Chikunguru 2017 Taylor Lopes	mumwe muenzi, ctrl + c, ctrl + v, gcc, vboxadd, vboxlinuxadditions, chaiyo bhokisi, vm, mahwindo	9 mashoko
otomatiki muunganidzwa rokuponesa typescript mu Visual Studio Code
In this post isu huchagadzirisa matambudziko maviri: 1) murayiro “tsc” Hazvina kuzivikanwa Integrated chiteshi VS bumbiro, E 2) muunganidzwa hakushandi kungoerekana kana rokuponesa faira “.ts” (Nyorai Script).
14 Chikunguru 2017 Taylor Lopes	angular.js, node.js, ts, tsc, typescript, chinooneka Studio yekubvuma, Vs bumbiro	siya mhinduro
Sei wako Zend PHP advertising
A pfupi uye mwero nhoroondo sei zvandakaita kunotora Zend vaipupurirwa PHP Engineer - ZCPE.
28 Kurume 2017 Taylor Lopes	PHP advertising, bvunzo, PHP, bvunzo, zcpe, zend, zend vaipupurirwa PHP injiniya	16 mashoko
Configuring DDNS kuti tenderera Via Modem + router
Kanganwa No-IP uye DynDNS! Ita router kwenyu kushanda zambuko muoti uye kugadzira DDNS pamwe DNS-O-Matic.
28 Ndira 2017 Taylor Lopes	afraid, asus, zambuko, ddns, DNS-O-matic, dnsomatic, dyndns, freedns, Modem, Nat, hapana-Rinozvikudza ip, router, technicolor	4 mashoko
Wedzera saizi yediski muVirtualBox
Kubva paWindows 10, maitiro ekuwedzera diski yeiyo yakagadzirirwa Ubuntu Linux (.vdi) usando Oracle VM VirtualBox? Ona kuti mukati 2 matanho!
11 Zvita 2016 Taylor Lopes	kuwedzera disk, Wedzera nzvimbo, gpped, HD, modifyhd, ubuntu, vb, vboxmanage, vdi, virtualbox, vm	21 mashoko
WordPress: bvisa URL yekutonga dhairekodhi ne .htaccess
Maitiro ekutungamira sei dhairekitivhiti pamidzi yeserver yekutapa kana WordPress yakagadzirirwa kushanda seema URL ane hushamwari?
7 Zvita 2016 Taylor Lopes	pamavak, h99ocs, nyora zvekare, ane hushamwari url, Wampserver, Wordpress, www, Xampp	siya mhinduro
19 Mbudzi 2016 Taylor Lopes	gadziridza, gadza, java, Linux, ubuntu, gadziridza	siya mhinduro
Sei wako Zend PHP advertising A pfupi uye mwero nhoroondo sei zvandakaita kunotora Zend vaipupurirwa PHP Engineer - ZCPE. Introdução A ideia não é falar sobre as vantagens (kana kwete) kuva advertising. Ndinoda kugoverana ruzivo rwangu, o que talvez ajude out...
otomatiki muunganidzwa rokuponesa typescript mu Visual Studio Code In this post isu huchagadzirisa matambudziko maviri: 1) murayiro "tsc" Hazvina kuzivikanwa Integrated chiteshi VS bumbiro, E 2) muunganidzwa hakushandi kungoerekana kana rokuponesa faira ".ts" (Nyorai Script). Introdução Apenas para contextualizar, oh iwe ...
Wedzera saizi yediski muVirtualBox Kubva paWindows 10, maitiro ekuwedzera diski yeiyo yakagadzirirwa Ubuntu Linux (.vdi) usando Oracle VM VirtualBox? Ona kuti mukati 2 matanho! Problema Quando se tem um Sistema operacional virtualizado, zvinozivikanwa kupera diski nzvimbo mushure meyako ...
Copyright © 2022 taylorlopes.com kubva Oct 2012, 3.110.685 upindo